Umkhuhlane uqhawule amaphiko kwaKFC | Ilisolezwe
Umkhuhlane uqhawule amaphiko kwaKFC
Iindaba / 9 November 2017, 02:00am / Michael Nkalane
UMKHUHLANE weentaka iH5N8 ogquba eNtshona Koloni ngunobangela wokunqongophala kwamaphiko iZinger Wings kwaKFC.
Lo mkhuhlane osele ubulele iinkukhu ezingapha kwezigidi ezibini uqale ngeyeThupha, wabangela nokwenyuka kwexabiso lamaqanda.
Umonakalo walo mkhuhlane uqikelelwa kwizigidi ezisibhozo zeerandi.
Eli nani lingenyuka nanjengoko amafama elahlekelwa kuba iinkukhu ziseluvalelweni.
UMphathiswa woPhuhliso kwezeziMali eNtshona Koloni, uAllan Winde, uthi kokokuqala ushishino lweenkukhu ligutyungelwa ngumkhuhlane oyingozi ngolu hlobo.
Uthi ziqikelelwa kuma-29 ezigidi iinkukhu ezifuyiweyo kweli phondo, kukho neziyi 185 000 ezifuywe ezindlwini.
“INtshona Koloni lelona phondo lichaphazelekileyo kwilizwe liphela. Iinciniba eziyi-12 sele zichaphazelekile e-Eden.”
UWinde uthe sele kusekwe iqela lokujongana nentlekele xa inokuthi iqhubekeke. Isithethi sakwa-KFC eAfrica, uThamisa Mkhwanazi, uthe oku yimiphumela yalo mkhuhlane.
“U-KFC SA uqinisekile ukuba lo mkhuhlane unegalelo ekunqongophaleni kwamaphiko (zinger wings). Sixhalabile ngemiphumela kwixesha elide ngenxa yalo mkhuhlane. Ziyaqhuba iingxoxo phakathi kwabathengisi nabathengi beenkukhu kwakunye norhulumente ukuzama ukufumana isisombululo.”
Umnini-plasi elithengisa iinkukhu ePhilippi uHenry le Roux, uthe alikabikho ithemba lokuba le meko inganyamalala ngokukhawuleza.
Uthi naye usayekile ukufuya iinkukhu okwangoku.
“Ndithenga koogxa bam abakwamanye amaphondo. Lo nto ibangela ndenyuse amaxabiso. Nto leyo endibalekisela ngabathengi. Kaloku ngoku kufuneka nditsale neemali zesithuthi esindiphathela ezi nkukhu,” utshilo.
ULe Roux uthe naye uyoyika ukutya inyama yenkukhu. “Bendineenkukhu eziphaya kuma-500 ndagqithisa ngazo ukuba maziye kuhlolwa lo mkhuhlane. Kaloku andinakubulala abantu. Ndisalindile ke ukuba mazibuye okanye kuthiwe mazibulawe. Yinyanga yesibini le ngoku kwaye andisenathemba lokuba zikulungele ukuthengiswa.”
UMandisa Matshabisa onesifo soxinizelelo lwegazi, uthi le meko yokunqongophala kweenkukhu imkhathaza kakhulu ngoba wavalwa ngugqirha kwinyama ebomvu.
“Yeyona nyama kwathiwa mandiyitye le, andazi xa nayo iphela ndizotya ntoni. Le nto ithetha ukuba andisayi kuzifumana izondlo zomzimba ezifumaneka enyameni. Ndiyambongoza urhulumente azame icebo zibuye iinkukhu. Nokuba uzithenge kwamanye amazwe mazibekhona qha,” utshilo.